Anonamira Cherechedzo Mapurogiramu uye nzira Isingaite Yekuzviita | Linux Vakapindwa muropa
Sticky noti maapplication uye nenzira isingashande yekuzviita
Kazhinji tinofanirwacherekedza zviyeuchidzo zvidiki zvekuti isu tinofanirwa kuve nazvo uye hazvina kukodzera kuvhura kunyorera. Neraki, pane edhijitari vhezheni yedhijitari noti maapplication. Ngatione dzimwe nzira.
1 Shandisa iyo desktop kumashure
2 Anonamira noti maapplication
Shandisa iyo desktop kumashure
Mune yakasarudzika vhezheni yeGNOME, iyo desktop desktop ine chete yekushongedza basa. Zvisinei, tinogona kukupai kushandisa. Iwe unongoda kugadzira dhizaini saizi yako resolution yechiso ne LibreOffice Dhirowa, Krita kana chimwe chirongwa chakafanana, nyora kana kudhirowa zvaunoda kurangarirar, chengetedza iyo jpg fomati uye isete seyako desktop desktop.
Ini ndinozviita nenzira inotevera neiyo Gimp
Ini ndinogadzira 1600x900px mufananidzo wechena kumashure.
Ini ndinoshandisa iyo rectangular sarudzo chishandiso kutara iwo maringe nezve 1 cm kubva kumucheto.
Ini ndinoshandisa trace yekusarudza chishandiso ine yakakomberedzwa kujoina maitiro uye hupamhi hwe1px.
Ini ndinoshandisa zvinyorwa uye kunama maturusi ekuwedzera zviyeuchidzo.
Kana ndapedza ini ndinotengesa kunze kwemufananidzo uye kuusarudza semberi negadziriro yekugadzirisa.
Kutaura chokwadi, haisi nzira inobatsira zvikuru, pese paunoita shanduko unofanirwa kudzima uye kurodha zvakare mufananidzo. Neraki tine dzimwe nzira.
Anonamira noti maapplication
Iri svondo Chave nesu kwenguva yakareba pasina kupera. Iyo inotibvumidza isu kugadzira inokurumidza manotsi, zviyeuchidzo, ku-kuita zvinyorwa uye madhiidhi ehukama.
Inokutendera iwe kumisikidza zviyeuchidzo nemhando dzakasiyana dzearamu.
Iyo ine Calculator yekuita mashandiro akanyorwa mune zvinyorwa. Iwo anotenderwa mashandiro ari +, -, * (wandisa), / (gova), uye ^ (simba). Inotsigira maumbirwo Pi uye E. Inotsigirawo mabasa Sin [x], Cos [x], Tan [x], Log [x] kana Log [x, y], Exp [x] uye Sqrt [x].
Inotsigira kurongeka kwemanotsi muboka. Mapoka anogona kuratidzwa uye kuvanzwa
Izvo zvinokwanisika kugadzirisa manotsi nekushandura iyo color, iyo typography, uye pachena.
Inogona kushandiswa chebhokisi rekutarisa kuita-zvisikwa zvinyorwa
Iwe une mukana wekubatanidza mafaera.
Inotsigira kugadzirwa uye kushandiswa kwetemplate
Manotsi anogona kuchengetedzwa nepassword
Iyo ine rutsigiro rwemifananidzo online uye yakanamirwa kubva kune clipboard.
BalloonNote inowanikwa yeWindows, Linux neMac. Inoda Java chaiyo muchina.
Iri svondo inowanikwa yeLinux mune Snap fomati uye inogamuchirawo kuiswa kwemultimedia zvemukati.
Otomatiki kuponesa manotsi.
Kubvumirana manotsi uchishandisa Dropbox
Rudzi rwemashure uye bha yemusoro wezvesarudzo.
Editing sarudzo dze typography, ushingi, saizi, italic, runyorwa, kuenderana ...
Mifananidzo, vhidhiyo uye odhiyo inogona kuwedzerwa kubva kuDiski kuenda kumanotsi kuti utarise kubva kudhiraivha yemuno
Ziva kukiya kudzivirira kukanganisa netsaona.
Sevha uye unotora zvinyorwa.
Dzorera uye ita zvekare kugadzirisa
Inotendera kugadzirwa kwemaprofiles
Inogona kuchinja pakati pechiedza uye nerima madingindira
Mune ino kesi isu tine chirongwa chidiki zvisina mwero kuti iwe inokubvumira kuti uchengetedze zvinyorwa zvekushandisa gare gare nemamwe maapplication.
Iwo mavara anogona kutemwa, kuteedzerwa uye kunamirwa; uye zvinyorwa zvinogona kuchengetwa (semavara akajeka) uye kutariswa uye / kana kugadziriswa gare gare,
Rhinote inoshandiswa chete nekibhodi nemirairo iyi:
Ctrl-x: Cheka chinyorwa chakasarudzwa
Ctrl-c: Kopa mavara akasarudzwa
Ctrl-v: Namatira iwo mavara kubva ku clipboard (inofanirwa kushanda pamwe nekuteedzera / kutema zvinyorwa kubva kune chero application)
ctrl-z: Dzorera basa rekupedzisira
Ctrl-Shift-z: Dzorerazve basa rekupedzisira
Ctrl-n: Vhura chinyorwa chisina chinhu
Ctrl-o: Vhura chinyorwa chakachengetwa
Ctrl-s: Sevha noti yazvino
Ctrl-a: Sevha ikozvino noti sezita refaira
Ctrl-p: Dhinda chinyorwa chazvino paLinux
Ctrl-h: Chirongwa rubatsiro.
Kunyangwe iri muDebian uye zvigadzirwa zvinoshanda sechirongwa chakazara chinogona kutanga kubva kune iyo yekutanga. PaWindows nekumwe kugoverwa kweLinux kunofanirwa kutanga sePython script.
Iye zvino tichataura de yakavhurwa sosi kunyorera yeWindow chetes. Kunyangwe kutora diki diki nzvimbo (haipfuuri 300kb) chirongwa ichi chinounza mabhenefiti akafanana nezvirongwa zvatakurukura pamusoro uye zvimwe zvimwe.
Sarudza zviri nyore kuti ndeapi manotsi ekuratidza uye ekudzima kana kusevha kuitira gare gare.
Kusimbisa mapikicha ePHP, HTML uye SQL.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Sticky noti maapplication uye nenzira isingashande yekuzviita
Kuva nezvinyorwa zvakawiriraniswa chishandiso chine simba kwazvo, asi ini handisi kuwana chero "yakavhurika sosi" inoshanda pakati pe linux ne android asi chete pane yemuno network (kwete internet), chimwe chinhu chakareruka semanotsi akawiriraniswa paLAN chakazotadza Android laptop yebasa zuva nezuva, ini ndanga ndichishandisa Joplin asi zvakatanga kurovera padiki.
Ndiri kuyedza panguva ino:
Ini ndakamirira kumwe kurudziro yeakavhurika sosi maapplication kuyananisa manotsi paLAN.
Canonical inoburitsa Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa ine nyowani Yaru theme, GNOME 3.36 uye 5 makore ekutsigira
Sayenzi Linux 7.8 yakatoburitswa, ziva shanduko dzakakosha kwazvo